08/06/12 ~ Myanmar Forward
မျက်နှာဖုံးမည်းသုံး၍ ဂျာနယ်များ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် တောင်းဆို
Posted by drmyochit Monday, August 06, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
Messenger ဂျာနယ် ဖတ်နေသူတဦး (ဓာတ်ပုံ – ပိုင်စိုးဦး/ ဧရာဝတီ)
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကော်မတီ၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းများကို ဂျာနယ်များတွင် မဖော်ပြကြရန် စာပေစိစစ်ရေးက ပိတ်ပင် လိုက်သဖြင့် သတင်းဂျာနယ်များက ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများကို အမည်းရောင် ခြယ်သ ထုတ်ဝေကြ ခြင်းဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့က စတင်သော သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကော်မတီ၏ The Voice နှင့် Envoy ဂျာနယ် နှစ်စောင် ပြန်လည် ထုတ်ဝေခွင့်ရရှိရေး၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်းများကို ဖော်ပြခွင့်အတွက် ဂျာနယ် များက စာပေစိစစ်ရေးကို တင်ပြကြသော်လည်း ယင်းသတင်းများကို ဖော်ပြခွင့်မပြုဟု စာပေစိစစ်ရေးက အသိပေး အကြောင်းကြား လာကြောင်း၊ တချို့သတင်းဂျာနယ်များက စာပေစိစစ်ရေး၏ တားမြစ်မှုကို မလိုက်နာတော့ဘဲ သတင်းများ ထည့်သွင်း ဖော်ပြကြသကဲ့သို့ တချို့ သတင်းဂျာနယ်များကလည်း ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများကို အမည်းရောင်များဖြင့် ခြယ်သပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိကြောင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်လိုက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဂျာနယ်တချို့ ကတော့ တိုင်ပင်မှုမရှိဘဲ သူတို့ဟာသူတို့ မျက်နှာဖုံးတွေကို အမည်းရောင်တွေနဲ့ ထွက်လာကြတယ်။ တခါမှ အဲဒီလိုမျိုး မဖြစ်ဖူးသေးဘူး။ တော်တော်ကို ထူးထူးခြားခြားပါပဲ” ဟု သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကော်မတီ (ယာယီ) မှ သတင်းထောက် တဦးက ပြောသည်။
ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တပ်သားသစ်များစုဆောင်းခြင်းကြောင့် လယ်သမားများအခက်တွေ့နေ
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၃) ရက်နေ့က ကေအိုင်အေ မလိပါတိုက်နယ်ရုံးမှ ဘရန်ဂျာခေါင်းဆောင် တဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးဟာ မန်စီမြို့နယ်၊ မိုးခေါင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာနေ ဒေသခံ ကချင်လူမျိုး ယောင်္ကျားလေး (၁၂) ဦး နဲ့ မိန်းကလေး (၃) ဦးတို့ကို တပ်သားသစ် စုဆောင်းဖို့ ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ တပ်သားသစ်စုဆောင်းမှုတွေကို ကျေးရွာအတော်များများမှာ ပြုလုပ်နေ ခဲ့ ကြပါတယ်။ ယခုအချိန်ဟာ မိုးရာသီသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် စပါးစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ဖို့ ဆောင် ရွက်နေ ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
လယ်သမားတွေအနေနဲ့ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဖို့ ကောက်စိုက်သူများနဲ့ စာရင်းငှားများ ငှားရမ်း သော်လည်း ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ ၏ဖမ်းဆီးခြင်း၊ လူသစ်စုဆောင်းခြင်း ခံရမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် လယ်တောသို့ မလိုက်ရဲတဲ့အပြင် လယ်သမားများအနေနဲ့လည်း ယခုလို လူသစ်စုခြင်း ၊ ဆပ်ကြေးကောက် ခံခြင်းတွေကြောင့် လယ်ယာများ အချိန်မှီ မစိုက်ပျိုးနိုင်ပါက စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ် လာနိုင်ကြောင်း မိုးခေါင် ကျေးရွာနေ လယ်သမား ဦးဂမ်ဆိုင်းမှ ပြောသည်။
သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် လျှော့ရန်မေးခွန်းကို လက်ရှိအတိုင်း ၁၀ရက်သာ ပိတ်မည်ဟု တာဝန်ရှိသူဖြေကြား
လသာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြီးမြင့်က မဟာသင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ကို လေးရက် သို့မဟုတ် အကြတ်နှစ်ရက်ဖြစ်ပါက ၅ ရက်သာ ပြန်လည် သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းကို ယနေ့(သြဂုတ်လ၆ရက်)ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၂၀ ရက်မြောက်နေ့တွင် မေးမြန်းခဲ့ရာ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်က လက်ရှိကောင်းမွန်တဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဦးကြီးမြင့်က မြန်မာနိုင်ငံသည် အစစအရာရာ နိမ့်ကျနေသေးသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ ပိုမိုတိုးတက်နိုင်ရန် အတွက် အကြောင်းပြကာ အထက်ပါမေးခွန်းကို မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။
သင်္ကြန်တွင်း ၁၀ ရက် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည့်အတွက် ဧပြီလအတွင်းတွင် လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်များ တွင်ကျယ်မှုမရှိကြောင်း နှင့် ဧပြီလအတွက်အလုပ်ကိုကြိုတင်ရှောင်ထားရကြောင်း ကျိုးကြောင်းပြ မေးမြန်းသွားသည်။
အလားတူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း ရုံးပိတ်ရက် ၁၀ ရက်ဖြစ်သည့်အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ထူးထူးခြားခြားမရဘဲ ရုံးစောင့်ရသည့် အလုပ်သာ တိုးလာခဲ့ကြောင်း ဦးကြီးမြင့်ကဆိုသည်။
သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် ၁၀ ရက်သတ်မှတ်ခြင်းအား နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရက ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၆ ရက်က ကြေငြာချက်အမှတ် ၁/၂၀၀၇ ဖြင့် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အီရန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရေနံဓာတုပစ္စည်း စက်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
(တီဟီရန် သြဂုတ် ၅
အီရန် နိုင်ငံ အနောက် တောင်ပိုင်း မာရှာမြို့တော် ရှိ နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရေနံဓာတု ပစ္စည်း စက်ရုံ တွင် ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှု ကြောင့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး မီးလောင် ခဲ့ရာ တစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ပြည်နယ် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး မန်အူချာဟာ ယာတီ က ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၄ ရက်က အင်တာနက် သတင်း တစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါ မီးလောင် ကျွမ်းမှု ကြောင့် စက်ရုံ လည်ပတ်မှု များမှာ အနှောင့် အယှက် ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဟာယာတီ ၏ ပြောကြား ချက်ကို ကိုးကား၍ င်္မျေ သတင်း အေဂျင်စီ က ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံရှိ ရေနံ ဓာတု ပစ္စည်း စက်ရုံ များသည် မကြာမီ လများ အတွင်းက တိုက်ခိုက်မှု ခံခဲ့ ရခြင်း ကြောင့် ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို များစွာ ထိခိုက် စေခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကင်ညာသို့ ရောက်ရှိ
(နိုင်ရိုဘီ သြဂုတ် ၅)
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် သည် သြဂုတ် ၄ ရက်တွင် ၄င်း၏ ၁၁ ရက် ကြာ အာဖရိကခရီးစဉ်၏ စတုတ္ထမြောက် နေ့အဖြစ် ကင်ညာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါနိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များအား ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျ ရွေးကောက် ပွဲများ၏ အရေး ပါပုံကို တိုက်တွန်း ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟီလာရီ ကလင်တန် သည် ကင်ညာ အစိုးရ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီး များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လာမည့် နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက် ပွဲများ အတွက် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ကဲ့သို့ အဓိက ရုဏ်းနှင့် ဆူပူမှု များထပ်မံ မဖြစ်ပွား စေရန် တိုက်တွန်း ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သူမသည် ဆိုမာလီ အသွင် ကူးပြောင်းရေး အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် များ၊ ဒေသ တွင်းရှိ ခေါင်းဆောင် များနှင့် လည်း တွေ့ဆုံ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သူမ၏ ခရီးစဉ် သည် ဆီနီဂေါ နိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့ပြီး မာလာဝီ နှင့် တောင် အာဖရိက နိုင်ငံ များသို့ ဆက်လက်သွား ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
မြာက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်သည် တရုတ်အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
မြာက်ကိုရီး ယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်သည် အလည် အပတ် ရောက်ရှိ နေသော တရုတ် ကွန်မြူ နစ်ပါတီ(CPC) ဗဟို ကော်မတီ၏ နိုင်ငံတကာ ရေးရာဌာ နအကြီး အကဲWang Jiarui နှင့်သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် နှစ်နိုင် ငံဆက်ဆံ ရေးကိစ္စ ရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း Xinhua သတင်း တစ်ရပ် အရ သိရှိရ ပါသည်။
CPC နှင့် တရုတ် အစိုးရတို့ အနေဖြင့် တရုတ်-မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံ ရေးများအား မဟာ ဗျူဟာ မြောက်နှင့် ရေရှည်မျှော် မှန်းချက် တစ်ရပ် အဖြစ်ရှု မြင်ထား ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ရှုမြင်ချက်သည် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးစွာပူး ပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး ခိုင်မာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေမည့် ခိုင်မာသော မူဝါဒ တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း Wang ကပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ နှစ်နိုင် ငံအနေဖြင့် အဓိက ကျသောနိုင် ငံတကာ ရေးရာနှင့် ဒေသတွင်း ဆိုင်ရာကိ စ္စရပ်များတွင် မဟာဗျူဟာ မြောက်ဆက် သွယ်ပြီး ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း မှုကိုတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်းနှင့် ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် ပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်တည်ငြိမ်ရေး၊ လုံခြုံစိတ် ချမှုရှိ စေရန်နှင့် အရှေ့မြောက် အာရှဒေသ များတွင် ကြာရှည် တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်း ရေးရရှိ စေရန် မနားမနေ ကြိုးပမ်းလုပ် ဆောင်သင့်ကြောင်း Wang က ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်တည်ငြိမ် မှုရှိရေး အတွက် အမြဲတမ်း တက်ကြစွာ ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း ကင်ဂျုံအန် ကပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ Wang ဦးဆောင်သော တရုတ် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက် နေ့မှစ၍ မြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံသို့ အလည် အပတ်ရောက်ရှိ နေခြဲ့ကပြီး အဆို ပါခရီး စဉ်တွင်မြောက် ကိုရီးယား အလုပ်သ မားပါတီ (WPK) နိုင်ငံတကာ ရေးရာဌာန အကြီးအကဲ Kim Yong Il နှင့်တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေး ကိစ္စရပ် များကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိခဲ့ ရပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက (၄၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီး များအစည်းအဝေးကို ယခုလအတွင်း အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဟုဆို
(၄၄)ကြိမ် မြောက်အာဆီ ယံစီးပွားရေး ဝန်ကြီးများအ စည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်း အဝေးများအား ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငSiem Reap ပြည်နယ်တွင် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှ စက်တင် ဘာလ ၁ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ် မည်ဖြစ် ကြောင်း ကမ္ဘောဒီး ယား ကုန် သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနက သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ တွင်ထုတ် ပြန်ခဲ့ သည်ဟုXinhua သတင်း တစ်ရပ် အရ သိရှိ ရပါသည်။ ကမ္ဘော ဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်သည် အဆိုပါ အစည်း အဝေးကို သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆို ပါအစည်း အဝေးတွင် အာဆီ ယံအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံ များနှင့် တရုတ်၊ တောင်ကို ရီးယား၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနှင့် ရုရှား နိုင်ငံ တို့အပါ အဝင် ဆွေးနွေး ဖက်နိုင်ငံများ အကြား ကုန်သွယ် ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာပူး ပေါင်းဆောင် ရွက်မှုကို အလေးထား ဆွေးနွေးကြ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အာဆီယံ စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများသည် (၂၆)ကြိမ် မြောက် အာဆီယံ လွတ်လပ် သောကုန် သွယ်ရေး ဒေသ(AFTA) ဆိုင် ရာကောင် စီနှင့် (၁၅)ကြိမ် မြောက်အာဆီ ယံရင်းနှီး မြှုပ် နှံမှု ဒေသ(AIA) ဆိုင်ရာ ကောင်စီတို့ နှင့်အတူ ပူးတွဲ အစည်းအဝေး များပြုလုပ် မည်ဖြစ် ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ (၄၄) ကြိမ် မြောက် အစည်းအဝေး သည် အာဆီယံ စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများနှင့် ကမ္ဘာ့ မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲ တို့အကြား ဆွေး နွေး ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအ ဝေးတစ်ရပ် လည်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၈ဝ ကျော်တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါးအတုများ တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ သိမ်းဆည်းရမိ
(ပေကျင်း သြဂုတ် ၅)
တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် နိုင်ငံ တစ်ဝန်း အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၈ဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ ဆေးဝါး အတုများကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ပြီး ၄င်းကိစ္စ နှင့် ဆက်စပ် သည့် လူ ၂ဝဝဝ ခန့်ကို ထိန်းသိမ်း ထား ကြောင်း နှင့် ဆေးဝါး အတု ထုတ်သည့် ဆက်စပ် ပစ္စည်း ၁ဝဝဝ ခန့်ကို ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ့ ရေးရာ လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး ဌာနက သြဂုတ် ၅ ရက်တွင် ပြော ကြား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆေးဝါး အတု စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်မှု တွင် ရဲအရာရှိ ၁၈ဝဝဝ ခန့် ပါဝင် ကြောင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ ခွေး ရူးရောဂါ စသည် တို့အတွက် ထုတ်လုပ် သော ဆေးဝါး အတု မျိုးစုံကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ ကြောင်း နှင့် ၄င်း ဆေးဝါး များသည် သုံးစွဲသူတို့၏ အသည်း၊ ကျောက်ကပ် နှင့် နှလုံးတို့ကိုပါ ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
ဒီနေ့ ကျင်းပမည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းမည့် မေးခွန်းများ
Posted by drmyochit Monday, August 06, 2012, under သတင်းများ | No comments
(၁) တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်ကတ် ထုတ်ပေးရေး ကန့်သတ်ထားသော ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခွင့်ကို ဖြေလျော့ပေးရေး ကုန်ပစ္စည်းကို ကန့်သတ်မည့်အစား တင်သွင်းခွင့် ပေးပြီး အခွန်စနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ရေး အများပြည်သူ စားသုံးရန် မသင့် သော ကုန်ပစ္စည်းများကို နယ်စပ်နေ ပြည်သူများ သိရှိလိုက်နာရန် စစ်ဆေးထုတ်ပြန်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(၂) မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် ပြုခြင်းနှင့် တရားမ၀င် မော်တော် ဆိုင်ကယ် တင်သွင်းခြင်းကို တရားဝင်လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စမျိုး၌ ရေရှည် အကျိုးသက်ရောက်မည့် မူဝါဒမျိုးကို ချမှတ်၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ အမိန့် ညွှန်ကြား ချက်များထုတ်ပြန်သွားရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်း
(၃) တောင်သူ လယ်သမားများအား စိုက်ပျိုး စရိတ် ချေးငွေ အတိုးမဲ့ ချေးပေးခြင်းနှင့် လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူများကို အတိုးမဲ့ချေးငွေထုတ်ချေးပေးနိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိမေးခွန်း
(၄) လယ်ယာ လုပ်ငန်း ခွင်များတွင် အသုံး ပြုလျက်ရှိသည့် ရွက်ဖြန်း ပိုးသတ်ဆေးများသည် အန္တရယ် အလွန် ကြီးမားသဖြင့်ပိုးသတ်ဆေအန္တရာယ်ပညာပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ၊မရှိမေးခွန်း
(၅) လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်းမြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် စက်မှုလက်မှု ကုန်သည်များ အသင်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဆီထွက်သီးနှံ လုံလောက်စွာ ထွက်ရှိနိုင်ရေး အစီအမံ ပြုလုပ်နိုင်သော စွမ်းအားရှိ၊မရှိမေးခွန်း အစရှိသည့် မေးခွန်းများကို အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက မေးမြန်းကြမည် ဖြစ်ပြီး
(၁) အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်က သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားခြင်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း၊အတည်ပြုခြင်း။
(၂) ကောက်ပဲသီးနှံ ရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသား လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
(၃) နိုင်ငံတော်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းကြီးများသည် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ရေရှည်ထိရောက် အကျိုးပြုစေရန် သီးခြားလွတ်လပ်သော အတိုင်ပင်ခံ အင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့များ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရေး ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ခုနှစ်ဦးက ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ပြန်လည် ဖြေရှင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း
အစရှိသည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် တက်နိုင်ရန် အပစ်ရပ် ခိုင်မာဖို့လိုဟု KNU ပြော
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU အနေနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ခိုင်မာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ အပြီး၌ KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နော်မေဦး က မဇ္ဈိမကို ပြောကြားလိုက်သည်။
“ခိုင်မာတဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို ရဖို့ ကျမတို့ လုပ်နေတာပါ။ ပြည်ထောင်စု အဆင့်ကို ခြေလှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ခိုင်မာဖို့ လိုတယ်” ဟု သည်။ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် အဖွဲ့နှင့် KNU တို့၏ တွေ့ဆုံပွဲကို သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မြဝတီမြို့၌ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်မှ နေ့လည် ၂ နာရီ ခွဲအထိ ကျင်းပခဲ့သည်။မြန်မာ အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်၍ စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်းတို့ ပါဝင် တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။ KNU ဘက်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်၍ နော်မေဦး၊ ပဒို သောသီဘွဲ၊ စောအောင်ဝင်းရွှေတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။KNU ဘက်မှ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲကပင် ၁၁ ချက် ပါဝင်သည့် တောင်းဆိုချက်ကို ပေးအပ်ထားခဲ့ပြီး ဦးအောင်မင်း မှလည်း အချက်အားလုံးကို မူအားဖြင့် သဘောတူသည်ဟု ပြောကြားထားသည်။
Posted by drmyochit Monday, August 06, 2012, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
From - ပေါ်ပြူလာ
ယနေ့ကျင်းပသော လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှ စ၍ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော် ကြီးများ၏ လုံခြုံရေး အတွက် လွှတ်တော် အ၀င်တွင်သာ မက လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အဆောက်အအုံ အတွင်းပိုင်းတွင်ပါ မီဒီယာ သမားများ အပါအ၀င် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များကိုပါ လုံခြုံရေး တိုးမြင့် စစ်ဆေးနေ ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကိစ္စအား မီဒီယာ များ၏တွင် ရေးသားဖော်ပြကြသည့်သတင်းအချို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြာင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တို့က ထင်ကြေးပေးကြသည်။
From Yangon Media Group
''အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပက်သက်တဲ့သူ မှန်သမျှကိုရုံးတင်စစ်ဆေးနေတယ်။ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမယ်။ စစ်တွေနဲ့မောင်တော အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါဝင်ပက်သက်တဲ့ သူတွေကို လည်း တက်နိုင် သမျှ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် ထားပြီးပြီ။ တချို့ ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ထားပြီးသား ဖြစ်သလိုတချို့ ကိုလည်း ဆက်လက် စစ်ဆေး နေပါ တယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လည်းအကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ သူတွေ ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖော်ထုတ်ဖို့လို ပါတယ်။''ဟုအဆိုပါတာဝန်ရှိသူက ဆက်လက် ပြောသည်။
ယခုအခါရခိုင်ပဋိပက္ခ အကြမ်းဖက်မှု များတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများ ကိုတရား ဥပဒေအရအပြစ်ပေး နိုင်ရန် မျက်မြင် သက်သေများနှင့် စတင်ကာစစ်ဆေးနေ ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
'ကျွန်တော့်က မောင်တော အလိုတော် ပြည့်ကျောင်း မှာနေတာ။ ကျွန်တော့်ကို အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ သက်ဆိုင်ရာ ကမေးတယ်။ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ကြားခဲ့ တာတွေကို အကုန် ပြောတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါတဲ့ သူတွေကိုမှတ်မိသမျှ ကျွန်တော်ပြောတယ်။''ဟုမောင်တော အလိုတော် ပြည့်ကျောင်း တိုက်မှ ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦးကပြောသည်။
မောင်တောမြို့နယ် မောရဝတီ ကျေးရွာတွင်လည်း ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦးက အကြမ်းဖက်မှုတွင်ပါဝင် ခဲ့ သည့်လူမျိုးခြား ၇၄ ဦးကိုစာရင်းပြု စုကာသက်ဆိုင်ရာသို့တင်ပြနိုင်ရန်စီ စဉ်နေကြောင်းသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့ကနေ စုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးနိုင်ရေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ်အိုဟေးကင်တားနား (Tomas Ojea Qintana) က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အကဲခတ် ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တပတ်ကြာခရီး ရောက်ရှိ နေချိန်မှာ မစ္စတာ ကင်တားနားက အခုလို ပန်ကြားလိုက်တာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး ဆူပူမှုတွေ တည်ငြိမ်ရေး အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အဆမတန် အင်အား သုံးခဲ့တာတွေ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း မစ္စတာ ကင်တားနားက သူ့ရဲ့ ၆ ရက် ကာ ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်တဲ့နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ ချက်ချင်း မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အမှန်အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ တဘက်နဲ့တဘက် ချဲ့ကား စွပ်စွဲ ပြောဆိုတာတွေ ရှိနေတာကြောင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အလားအလာ မကောင်းဘဲ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နိုင်သလို တင်းမာ မှုတွေလည်း တိုးလာနိုင်တယ်လို့မစ္စတာကင်တားနားကပြောသွားပါတယ်။
နိုင်ငံမဲ့ရိုဟင်ဂျာများအရေးနှင့် သမ္မတကြီး၏သဘောထားအပေါ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်ဆွေ၏ အမြင်
from - Hotnews Journal
နိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာများအရေးနှင့်ပတ် သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်း စိန်မှ ရိုဟင်ဂျာများအား တတိယနိုင်ငံသို့ ပို့မည်။ လာခေါ်မည့်သူမရှိပါက ခြံခတ် ထားမည်ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေ တိုင်းရင်းသားများ၌ လုံးဝပတ်သက် ခြင်းမရှိသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့်ပတ်သက် မိမိ၏ သဘောထားအားအတိအလင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတကြီး၏ ရပ် တည်ချက်အပေါ် ပြည်သူများမှ လွန်စွာ အားရဖြစ်လျက်ရှိပြီး အချို့သော ဒေသ များ၌မူ သမ္မတကြီး၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ထောက်ခံကြိုဆိုသော အားဖြင့် နိုင်ငံတော် အလံများပါလွှင့်ထူ ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ရို ဟင်ဂျာကိစ္စအပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ခဲ့ခြင်းနှင့် နိုင်ငံမဲ့ရိုဟင်ဂျာများ အကြောင်းအား သမ္မတကြီး တပ်မ တော်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က သမ္မတ ကြီး၏ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးချစ်ဆွေ(ခ) စာရေး ဆရာကြီး နောင်စစ်သည်အား မေးခွန်း အနည်းငယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ-
မေး- ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ ဂရက် ရိုက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီးသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရပ် တည်မှုနဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုအ ပေါ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အလွန်နှစ် ထောင်းအားရဖြစ်ကြပါတယ်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တပ်မတော်မှာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့စဉ် ဘဘဟာ သမ္မတကြီးရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ တယ်။ တစ်ချိန်က သမ္မတကြီးရဲ့ ဆရာ ဖြစ်ခဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးရဲ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့မှု အပေါ် ဘယ် လို မြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ- ကိုသိန်းစိန်ကMan of Principal ပဲ။ သူက ဟိုးအရင်ထဲက စည်းစနစ်နဲ့ နေတဲ့သူ။ ပြီးတော့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှု လည်း ရှိတယ်။ လောဘဇောတိုက်မယ့် သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကိုသိန်းစိန်အ ကြောင်းပြောရရင် အရင်နိုင်ငံတော် ၀န် ကြီးချုပ်လိုပေါ့နော်။ သူက သူအငြိမ်း စားသွားတဲ့အခါကြလို့ ငွေတစ်ပြားတစ် ချပ်ပိုလာရင် ကျွန်တော်ကို ဆဲကြပါ၊ ဆို ကြပါ၊ ထောက်ပြစမ်းပါဆိုတာမျိုးပါ။ ကို သိန်းစိန်အနေနဲ့ကလည်း ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်း လုပ်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ကရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုသိန်းစိန်ရဲ့ သဘောထား အပေါ် အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်For Most People Near Enough is Good Enough. အဲ့ဒါက လူအများစုကတော့ ရိုး ရိုးသားသားနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်လေးရရင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ကြတာပဲ။ နောက်တစ်ခု For few people good enough is never enough. ဒါကတော့ လူနည်းစု တွေက လောဘဇောတွေမသက်နိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးပါ။ ကိုသိန်းစိန်ကတော့ ပထမ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါ။ ကိုသိန်းစိန် ပြောတာတွေ ကလည်း ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အားလုံး လမ်းမှန်ကမ်းမှန်တွေပါပဲ။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ၏ ရခိုင် ပြည်နယ် ခရီးစဉ် ဓါတ်ပုံများ
မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ KNU တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကြို ဆွေးနွေးနေကြစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - KIC)
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရဘက်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော် ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ အဖွဲဟာ မကြာခင်လုပ်မယ့် အစည်းအဝေး အတွင်း နှစ်ဘက် တပ်မတော် က လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက် လို့ ဆွေးနွေးကြဖို့ အတွက် မြ၀တီမြို့ မှာ ဒီကနေ့ အကြို ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ထိုင်း အခြေစိုက်သတင်းထောက်မအေးအေးမာကသတင်ပေးပို့ထားပါတယ်။
မြ၀တီမြို့ ခလရ (၂၇၅) တပ်တည်ရာနေရာမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ကတော့ အပစ်အခပ်ရပ်စဲရေးကို ပိုမိုခိုင်မာစေဖို့ နှစ်ဘက် လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အကြိုညှိနှိုင်းခဲ့ကြကြောင်းအခုလိုပြောသွားပါတယ်။
အစိုးရကရဲဝံ့ပြတ်သားစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူသုံးသပ်
From - MyanmarPost ဂျာနယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရက ရဲဝံ့ ပြတ်သားစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိပါက အခြေ အနေပိုမိုဆိုးရွား သွားစေနိုင်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြား ချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခြောက်ရက်ကြာ လာ ရောက်လေ့ လာခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်
အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ ကုလသ မဂ္ဂအ ထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ သောမတ်စ်အိုဂျေးကွင်တားနားက သြဂုတ် ၄ ရက် ည ၆ နာရီ ၄၅ မိ နစ်ခန့်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာလေဆိပ်၌ကျင်းပသည့် သတင်း စာ ရှင်းလင်း ပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူမှု အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာ နက်ရှိုင်း စွာအမြစ်တွယ်နေတဲ့ မယုံကြည်မှု တွေရှိနေတာကို ကျွန်တော်အလွန် စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ အစိုးရက ရဲဝံ့ တဲ့ခြေလှမ်းတွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်းမရှိရင် အခြေအနေကို ပို မိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါတယ်”ဟု မစ္စတာကွင်တားနားကသုံးသပ်သည်။
အင်ဒို သမ္မတက မြန်မာအစိုးရ အကောင်ဆုံး ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြောင်း ပြော
ကမ္ဘာမှာ မူစလင်ဘာသာဝင်အများဆုံးရှိရာ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ဆူဆီလို ယူဒိုယူနို က ရခိုင်ပြည် နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နေကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အနောက်ဂျားဗား ရှိသူ့ ရဲ့နေအိမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတ ယူဒိုယူနို က သူ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေ ကို တတ်နိုင်သမျှ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ ဘက်မလိုက်ဘဲ ကြိုးစား ရှင်းပြနေ တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်၊
ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခ ဟာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ မဟုတ်ဘဲ ဒေသတွင်း လူုအုပ်စုကြားဖြစ်ပွါးတဲ့ ပဋိပက္ခ သာဖြစ်ပြီး အ ကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေက မူဆလင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေတာ သာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကပြောပါတယ်
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်ဂလားဒေ့ရှ် ဇာတိဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ မျိုးဆက်လေးဆက် လောက်နေထိုင် လာတဲ့ သူတို့ ကို မြန်မာအစိုးရကတိုင်းရင်းသား၁၃၅မျိုးထဲမှာထဲ့သွင်းမှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။
ဒီပဋိပက္ခမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၂၈၀၀၀ ကနေ ၅၃၀၀၀ ထိ များပြားလါကြောင်း၊ စာရင်းအရ ရခိုင် ဒုက္ခသည် ၂၄၀၀၀ ရှိနေကြောင်း ၊ဝေဖန်သူတွေက မြန်မာအစိုးရ ဟာ ရခိုင်တွေကို ဦးစားပေး နေတယ်လို့ ဆိုကြပေ မဲ့ တဖက်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပိုရနေတယ်လုို့ ရခိုင်တွေက သတိမူ သဘောပေါက် ထားကြောင်းလည်းပြောဆိုပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံက ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနေနဲ့ သံတမန် လမ်းကြောင်း က တတ် နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရဲ့မျှော်လင့်မှုတွေ နဲ့ပတ်သက် လို့ စာ စောင်ပေးမို့ မယ်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ရှင်းပြသွားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝကျေးရွာ ထပ်မံ မီးရှို့ခံရ
သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝကျေးရွာတွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီက မီးရှို့မှု ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပွားကာ ၂ လတာ အတွင်း ဒုတိယအကြိ်မ် မီးရှို့မှုဖြစ်၍ အိမ်ခြေ ၃၀ ကျော် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ကျေးရွာသားတဦးက YPI သို့ပြောသည်။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ အများစု နေထိုင်သည့် ယင်းအပေါက်ဝ ကျေးရွာတွင် ရဲစခန်းရှိသော်လည်း ရဲစခန်းမှ မည်သို့မျှ ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မီးရှို့မှုအပြင် လူတဦးလည်း အသတ်ခံရကာ သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော၊ စစ်တွေမြို့တို့တွင် မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးခါစ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ကလည်း အပေါက်ဝ ကျေးရွာရှိ လူနေအိမ်များကို မီးရှို့သည့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ နေအိမ် ၄၀ နီးပါး လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့်နောက် ၂ လနီးပါးအကြာ ယခုကဲ့သို့ ဒုတိ ယအကြိမ် မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမအကြိမ် မီးရှို့မှု သတင်းကို အစိုးရထုတ်နေ့စဉ် သတင်းစာ၌ ဖေါ်ပြခဲ့ရာတွင် အိမ်ခြေ ၁၂ လုံးသာ မီးလောင်ကျွမ်းကာ လက် သည်တရားခံကို ရှာဖွေလျှက်ရှိသည်ဟု ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
ယနေ့မီးရှို့မှု၏ လက်သည်မှာ ယခင်တကြိမ် မီးရှို့သူပင်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းအနေဖြင့် ယူဆကြောင်းပြောဆိုသောလည်း သီးခြား အတည်ပြုချက်မရသေးပါ။ မီးမှာ ညနေ ၅နာရီဝန်းကျင်တွင် ငြိမ်းသွားခဲ့သည်ဟု လည်း၎င်းကပြောသည်။
အိမ်ခြေ ၇၀ ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းသွားသဖြင့် အပေါက်ဝကျေးရွာတွင် နေစရာ အိမ်မလုံလောက်သည့် အခက် အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
ဇွန်လဆန်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူ ၇၇ ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ လူနေအိမ် ၄ ထောင်ကျော် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီး လူပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရသည်။
အရင်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာဖက် ပါပြီး ဘင်္ဂလီ (၅) ဦးအပြင် ဒေါ်စုနဲ့ သာ သီးခြားတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမလုပ်တဲ့ ကွင်တားနား
Mr. Tomás Ojea Quintana အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် သီးခြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဘာကြောင့် မရှိခဲ့သလဲဆိုသည့် Eleven Media Group ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် Mr. Tomás Ojea Quintana က ''ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပြီး မီးရှို့ ခံရတဲ့ ရခိုင်ကျေးရွာကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်'' ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် Mr. Tomás Ojea Quintana အနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မရှိခဲ့ ဘူးဆိုတာ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လားဟု ထပ်မံမေးမြန်းခဲ့ရာ ၎င်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မေးခွန်းလေးခုသာ မေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း မီဒီယာများအတွက် မေးခွန်းနှစ်ခုနှင့် ပြည်ပမီဒီယာများအတွက် မေးခွန်းနှစ်ခုကို မေးမြန်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Mr. Tomás Ojea Quintana သည် မောင်တောမြို့သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ရာတွင် ဘင်္ဂါလီငါးဦးကို သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံမှုမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလီ ငါးဦး အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း သဘောတူပြီးနောက် "နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လို အပ်" ဟု မှတ်ချက် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မွတ်စလင် ဟက်ကာများမှ မြန်မာနိုင်ငံအားCyber Attack ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်ကို ၁၀.၈.၂၀၁၂ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂါလီ များကို ထောက်ခံသည့် မွတ်စလင် ဟက်ကာများ စုပေါင်း ကာမြန်မာနိုင်ငံအား Cyber Attack ပြုလုပ်ရန် Operation Myanmar Hacker Group ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ ဒီလို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် Hacker ၄၀၀၀ ကျော်ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ မွတ်စလင် Hacker ၁၀၀၀ ကျော် က ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။။ တိုက်ခိုက်မှု့ကို တနင်္လာနေ့ (၆.၈.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် စတင်တိုက်ခိုက် ရန် ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း ပိုမိုထိရောက်စွာ တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်အတွက် (၁၀.၈.၂၀၁၂) သောကြာနေ့ သို့ ပြောင်းရွှေ့သတ်မှတ် တိုက်ခိုက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေဖြင့် မပေါ့ဆကြရန် နှင့် မိ မိတို့၏ ၀ဘ်ဆိုက်များအား စောင့်ကြည့် ကာကွယ်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံမှုခိုင်မြဲရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကင်ဂျုံအွန်နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင် တွေ့ဆုံ
(ပြုံယမ်း သြဂုတ် ၃)
တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီ ဗဟို ကော်မ တီ၏ နိုင်ငံတကာ ရေးရာ ဌာနမှ အကြီး အကဲ ဝမ်ကျား ရိသည် သြဂုတ် ၂ ရက် က မြောက်ကို ရီးယား နိုင်ငံသို့ အလည် အပတ် ရောက်ရှိစဉ် အတော အတွင်း နှစ် နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့် မည့်ကိစ္စရပ် များကို မြောက် ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံ အွန်နှင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ကြောင်း အင်တာနက် သတင်း တစ်ရပ် အရ သိရသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ရာတွင် တရုတ် သမ္မတ ဟူကျင် ထောင်းနှင့် အခြားပြည် နယ်နှင့် ပါတီ များမှ ခေါင်းဆောင် များကိုလည်း မိမိ အနေနှင့် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး ပါကြောင်း ဝမ်ကျား ရိအား ကင်က ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
တရုတ်နှင့် မြောက် ကိုရီးယား ဆက်ဆံ ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီမှ ခေါင်းဆောင် များနှင့် တရုတ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် များသည် မဟာဗျူဟာ နည်းအရ လေ့လာ သုံးသပ် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီး ချစ်ကြည်စွာ ဆက်ဆံ ရေးကို တိုးမြှင့် ရန်နှင့် ဆက်လက် တည်တံ့ ခိုင်မြဲ စေရန် အတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ပြီး မဆုတ် မနစ် လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန် စေရန်၊ ပါတီ အချင်းချင်း အပြန် အလှန် နားလည်မှု ခိုင်မြဲ စေရန်နှင့် လက်တွေ့ ကျသော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး တို့တွင် တရုတ် နိုင်ငံ သည် မြောက် ကိုရီးယား နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အသင့် အနေအ ထားတွင် ရှိကြောင်း ဝမ်က ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးရန် ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းပြော
ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအား လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်း အထူး ရဟန်ယာဉ် ၂ စီးဖြင့် စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော-မြောက်ဦး-မဟာမုနိ-ကျောက်တော်မှ စစ်တွေတွင် ယမန်နေ့က ညအိပ်ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဦးကိုကိုနိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးလှမောင်တင်၊ ဒုဝန်ကြီး (၁၀)ဦးခန့်၊ ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး ဦးလှမြင့် အပါအ၀င် နယ်စပ်ရေးရာ၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးများ လိုက်ပါလာကြောင်းနှင့် မောင်တောမြို့နယ်မှ ဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် စစ်တွေမြို့လေဆိပ်သို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မောင်တော မြို့သို့ ၁၁ နာရီတွင် ဆိုက်ရောက်လာကာ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ဘူးသီးတောင်-မြောက်ဦးမြို့ မြို့နယ်များမှတဆင့် လည့် လည် သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
" ဒေသခံများနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ဆုံပြီး အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကျွဲနွားတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှုအပေါ် လယ် ထွန်စက်တွေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊ ဒေသခံတွေကို ပိုမိုတိုးတက်တဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ လုပ်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊ အကူညီတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ " ဟု နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း မောင်တောမြို့- အလယ်သံကျော် ခရီးစဉ်တွင် ခြားစားမှုဖြင့် ပြောင်းရွေ့အရေးယူ ခံနေရသော နစကကွပ်ကဲရေးမှူး ဦးအောင်ကြီး နေရာသို့ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့က ပြောင်းရွေ့လာသူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး(၄၀)နှစ် အနီးကပ် လိုက်ပါခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးများ တာဝန်ယူပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်မှ ခြစားမှုဖြင့် အရေးယူထားသော ဦးအောင်ကြီးထံမှ မြေပေါ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ အား သိမ်းဆည်း ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းထံမှ မြေအောက်ဘဏ္ဍာများအား သိမ်းဆည်းနိုင်မှုများလည်းရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းအား အရေးယူမည် အခြေအနေကို မသိရှိရသေးကြောင်း မောင်တောမြို့နယ် နစကသတင်းရပ်ကွက်များက ဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးမှာ သံတွဲမြို့နယ်မှ ရခိုင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့နယ် ဒေသခံများအနေဖြင့် ပြန် လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အားပေးအားမြောက် ပြုလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်နေကြသည်ဟု မြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
" ဒုသမ္မတကြီးက အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ လူရိုးတစ်ဦးလို့ မြင်ပါတယ်၊ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အမှန်အတိုင်း အကူအညီတွေ ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ သူကြားနေတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတာ လွဲချော်မှုတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်လို့ သူသုံးသပ်ပါတယ်၊ သူအမှန်ကို ကူညီဖို့ အတန်တန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ " ဟု မောင်တောမြို့နယ်မှ အနီးကပ် လုံခြုံရေး အရာ ရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း အနေဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အဖြစ်အမှန်အတိုင်း သိရှိနိုင်ရန်၊ ဒုက္ခရောက်နေကြသော ဒုက္ခ သည်များ၏ လတ်တလော အကူအညီလိုအပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ် တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လေ့လာစစ်ဆေးဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အမှန်အတိုင်း အခြေအနေများကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရှေ့ ပြေးအနေဖြင့် ရောက်ရှိလာကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးသိန်းစိန် လာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ဖွယ် အခြေ အနေများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ယနေ့ ညနေ ၄နာရီခန့်တွင် ကျောက်တော်မြို့မှ ဘုရားပေါင်းနှင့် ငတပေါင်းကျေးရွာများသို့ အ ပြန်လမ်းတွင် ဒေသ ခံများအား ကျောက်တော်မြို့ ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်မှ ဘင်္ဂလီမူဆလင်များ အ ကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့် င တပေါင်းကျေးရွာမှ ဒေသခံများ ကျောက်တော်မြို့သို့ ဈေးလာဝယ်ပြီး အပြန်လမ်းတွင် ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်မှ ဘင်္ဂလီမူဆလင် ၆၀ ကျော်ခန့် ဓါး၊ ဒုတ်များဖြင့် တိုက် ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ သည်။
" ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနဲ့ ငတပေါင်းရွာကလူတွေ ကျောက်တော်မြို့ဈေးမှာ ဈေးဝယ်ပြီး သူတို့ရွာကို သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ပြန်ကြတာ၊ ပိုက်သယ်ရွာရှေ့ကိုရောက်တော့ ရွာက ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေက ထွက်လာပြီး ဓါးတွေ၊ ဒုတ်တွေနဲ့ လိုက် ခုတ်ကြပါတယ်။ လိုက် ခုတ်ကြတော့ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တွေက ကျောက်တော်မြို့ထဲကို ပြန်လှည့်ပြီး ပြေးလာကြတယ်။ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်သမားတစ်ဦး ပေါင်မှာဓါးဒဏ်ရာရသွားလို့ ခုဆေးရုံပို့ထားတယ်။ နောက်တစ်ခြားလူတွေတော့ ဒဏ်ရာ အထွေအထူးရရှိထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြန်ဖို့ကို အလွန်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။ " ဟု ကျောက် တော်မြို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုကျော်ခင်မှ ပြော သည်။
စစ်တပ်မှ ကျောက်တော်မြို့၊ ဂစ္စပနဒီ တံတားနှင့် ၄င်းဘင်္ဂမူဆလင် ပိုက်သယ်ရပ်ကွက်များတွင် လုံခြုံရေးယူထားပြီး ပိုက်သယ် ရပ်ကွက်များထဲသို့ အကြမ်းဖက်သွားသူများအား ၀င်ရောက်စုံစမ်း နေကြောင်းသိရှိရသည်။
ယင်းသို့အကြမ်းဖက်ပြီးနောက် ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝကျေးရွာတွင်လည်း ဘင်္ဂလီမူဆလင်တစ်ဦး မိမိအိမ်ကို မိမိ မီးရှို့ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ဒေသခံများ အလျင်မြန် မီးငြိမ်းသတ်လိုက်နိုင်၍ ၄င်းဘင်္ဂလီမူဆလင် အိမ်တစ် အိမ်တည်းသာ မီးလောင်ကျွမ်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ ၁၄မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော ကျောက်တော်အောက်ပိုင်း ဂုတ်ပီထောက်ကျေးရွာတွင် ဘင်္ဂလီ မူဆ လင်များ မိမိအိမ်ကို မိမိ မီးတိုက်ထွက်ပြေးသောကြောင့် အိမ်ခြေ ၇၀ခန့်မီးလောင်ကျွမ်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
" ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာက ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေနဲ့ ရခိုင်တွေရောပြီး နေထိုင်ကြတာပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့က ရခိုင် အိမ် တွေကိုမီးရှို့ချင်တာနဲ့ သူတို့အိမ်တွေ သူတို့မီးရှို့ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်။ ခုကျောက်တော်က စစ်တပ်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ စက်လှေနဲ့ လိုက်သွားကြပါတယ်။ ဘင်္ဂလီမူဆလင်နဲ့ ရခိုင်အိမ်စုစုပေါင်း ၇၀ကျော်လောက် မီးလောင်သွားတယ်လို့ ကြားရ ပါတယ် " ဟု ကျောက်တော်မြို့သို့ရောက်ရှိနေသော ဂုတ်ပီထောက်ကျေးရွာသား ကိုအစိုးမောင်က ပြောသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းရှိသော ဘင်္ဂလီမူဆလင်များထပ်မံပြီး အကြမ်းဖက်လာမည်ကို ကျောက်တော်ဒေသခံများ အလွန် စိုးရိမ်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ၃ဝဝ ကီလိုမီတာအထိ ရောက်ရှိပစ်ခတ်နိုင်သောဒုံးပျံတစ်စင်း အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခြင်း
အီရန် နိုင်ငံသည် အကွာ အဝေး ၃ဝဝ ကီလိုမီတာ အထိရောက် ရှိပစ်ခတ် နိုင်သော ဒုံးပျံတစ် စင်းအား အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပစ် လွှတ်နိုင် ခဲ့ကြောင်း အီရန် ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် အာမက်ဗာ ဟီဒီက သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ သည်ဟု Xinhua သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ ဒုံးပျံသည် ပင်လယ် ပြင်နှင့်မြေပြင်ရှိ ပစ်မှတ်များကိုပစ် ခတ်နိုင်စွမ်း ရှိသော စတုတ္ထ မျိုးဆက်Fateh 110 ဒုံးပျံအမျိုး အစားဖြစ်ကြောင်း လည်း ဗာဟီဒီက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဒုံးပျံသည် ရေဒါစနစ်များ၊ ကွပ်ကဲမှု အခြေစိုက် စခန်းများနှင့် လက်နက်သို လှောင်ရုံ များကိုလည်း တိကျစွာ ပစ်ခတ်နိုင် စွမ်းရှိကြောင်း ၄င်းက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဒုံးပျံများ တည် ဆောက်ခြင်းသည် နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဟန့် တားနိုင်စွမ်း ကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့် နိုင်ငံအား ကျူးကျော်လာ သူများကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၄င်းက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အီရန်နိုင် ငံအနေဖြင့် တာဝေးပစ် ဒုံးပျံများတည် ဆောက်ရာတွင်လည်း အောင်မြင် မှုကောင်း များရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
စတုတ်ထမျိုးဆက် င်္ Fateh 110 ဒုံးပျံစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေပုံ
ဆီးရီးယား၌ ရုရှားစစ်သင်္ဘောများဝင်ရောက်ဆိုက်ကပ်ခွင့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ခြင်း
ရုရှား စစ်သင်္ဘော များသည် ဆီးရီးယား နိုင်ငံ တာတပ်စ် ဆိပ်ကမ်း၌ ဝင်ရောက် ဆိုက်ကပ် ရန်အစီအစဉ် မရှိသော်လည်း ဖြစ်နိုင် ခြေမရှိဟု မဆိုလိုကြောင်း ရုရှား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနက သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်းတစ် ရပ်အရ သိရှိရ ပါသည်။ ရုရှားစစ် သင်္ဘော အုပ်၏မစ်ရှင် ပိုမိုကျယ် ပြန့်လာပါက နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ အခြေပြု ရန်အတွက် တာတပ်စ် ဆိပ်ကမ်း၌ အပြည့်အဝ ဆိုက်ကပ် ပိုင်ခွင့်ရှိ ကြောင်း အဆိုပါ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာ န၏ကြေညာ ချက်တွင် ဖော်ပြ ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စစ်သင်္ဘော အုပ်၏ကွပ်ကဲ မှုအဖွဲ့သည် ထောက်ပံ့ရေး ရေယာဉ်များ မှလည်းကောင်း၊ တာတပ်စ်ရှိ ထောက်ပံ့ရေး အခြေ စိုက်စခန်း မှလည်းကောင်း စစ်သင်္ဘော များ၏လိုအပ် ချက်များကို ထပ်မံဖြည့် တင်းပေး ရေးစီစဉ် လျက်ရှိ ပါသည်။ လတ်တ လောတွင်မူ စစ်သင်္ဘော ၁ဝ စီး ပါဝင်သော ရုရှားစစ် သင်္ဘောအုပ် တစ်အုပ်သည် မြေထဲပင် လယ်တွင် စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်း များဆောင်ရွက် ရန်ရောက်ရှိ နေကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ ရုရှားကာ ကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ အဆိုအရ စစ်သင်္ဘော နောက်ထပ် ၃ စီးအား အဆိုပါ သင်္ဘောအုပ်သို့ စေလွှတ် လေ့ကျင့် စေမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။ ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သော အပတ်က ရုရှား ရေတပ်ဦးစီးချုပ် Viktor Chirkov က တာတပ်စ် ဆိပ်ကမ်းအား စစ်ဘက် အထောက် အကူပြု အခြေစိုက် စခန်းအဖြစ် ထိန်းသိမ်း သွားမည်ဖြစ် သော်လည်း လိုအပ်လာလျှင် ဆိပ်ကမ်း မှဘေးကင်း ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ စေမည်ဟု မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
ဆူဒန်နှင့်တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတို့သည် ရေနံနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်း
ဆူဒန်နှင့် တောင်ဆူဒန် နိုင်ငံတို့သည် တောင်ဆူ ဒန်ခွဲမ ထွက်မီက ဆူဒန်နိုင်ငံ ကထိန်းချုပ် ထားသော ရေနံများ မျှဝေသုံးစွဲ ရေးနှင့်ပတ် သက်၍ သဘော တူညီမှုတစ် ရပ်ရရှိခဲ့ ကြောင်း အာဖရိက သမဂ္ဂကြား ဝင်စေ့စပ်ရေး ကိုယ်စား လှယ်Thabo Mbeki က သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု AFP သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရ ပါသည်။ ရေနံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘဏ္ဍာရေး အစီအစဉ်များ အားလုံးကို နှစ်ဘက် စလုံးက သဘော တူညီခဲ့ ကြောင်းနှင့် ရေနံ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှုကို ပြန်လည် စတင်သွား မည်ဖြစ် သော်လည်း စတင်မည့် အချိန် အသေးစိတ် ကိုမူ Mbeki က အတည် ပြုပြောကြား ခဲ့ခြင်းမ ရှိကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ ရေနံထုတ် လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှုများ ပြန်လည် စတင်ရေး အတွက် ပြင်ဆင် ထားရန် ရေနံ ကုမ္ပဏီများ ထံညွှန်ကြား လာချိန်တွင် နောက်ထပ် ဆောင်ရွက် မည့်အစီ အစဉ်များကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း Mbeki က ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က ဆူဒန်နှင့် တောင်ဆူဒန် နိုင်ငံအကြား အငြင်းပွားမှုများ အဆုံးသတ် ရေးနှင့် ရေနံထုတ် လုပ်မှုပြန်လည် စတင်ရေး ပြောကြား ပြီးနောက် Mbeki ၏ကြေညာချက် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ နိုင်ငံရေးအသွင် ကူးပြောင်းမှုအတွက် ဆက်လက်ကူညီမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂက ပြောကြားခဲ့ခြင်း
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလ သမဂ္ဂ- အာရပ် အဖွဲ့ချုပ် ပူးတွဲ အထူး သံတမန် ကိုဖီ အာနန်က ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပြီး နောက်တွင် ဥရောပ သမဂ္ဂ အနေဖြင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ နိုင်ငံရေး အသွင် ကူးပြောင်း မှုအတွက် ဆက်လက် ကူညီ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥရောပ သမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ အကြီး အကဲ ကက်သရင်း အက်ရ်ှတွန်က သြဂုတ်လ ၂ ရက် နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကိုဖီ အာနန် ရာထူးမှ နုတ်ထွက် သွားခြင်း အတွက် များစွာ စိတ်မ ကောင်းဖြစ် မိကြောင်း အက်ရှ် တွန်က ကြေညာ ချက်တစ် စောင်တွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဆီးရီးယား ပဋိ ပက္ခအား အဖြေ ရှာရန် အတွက် ဖေဖော် ဝါရီလ ၂၃ ရက် နေ့တွင် ကိုဖီ အာနန်အား ၄င်း ရာထူးတွင် ခန့်အပ် တာဝန်ပေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်ရန် ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအားလုံးအပေါ် UNSC က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း
ပုံစံ အမျိုး မျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက် နေသော အကြမ်း ဖက်မှု များအား လုံးရပ် တန့်ရန် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ လှုပ်ရှား မှုအဖွဲ့ (M 23) အပါ အဝင် ကွန်ဂို သမ္မတ နိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များအား လုံးအပေါ် ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ က သြဂုတ် လ ၂ ရက် နေ့တွင် တိုက်တွန်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လူသစ် စုဆောင်းမှု၊ ကလေး သူငယ်များ အသုံး ပြုမှုနှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်း ဖက်မှု စသည့် အကြမ်း ဖက်မှု များအား လုံးရပ် တန့်ရန် M 23 အဖွဲ့ အပါ အဝင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များအား ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံက တိုက်တွန်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ နေအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး နေရသော သူများနှင့် ဒုက္ခသည် အရေ အတွက် တိုးမြှင့် လာမှု အပါ အဝင် ကွန်ဂို သမ္မတ နိုင်ငံ၏ မြောက် ကီဗူပြည် နယ်တွင် လူသား ချင်းစာ နာထောက် ထားမှု ဆိုင်ရာ အခြေ အနေများ ဆိုးရွား နေမှု အပေါ် အလွန် အမင်း စိုးရိမ်ကြောင်း လုံခြုံရေး ကောင်စီက ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့ပြီး သင့်လျော်သော လူသားချင်း စာနာ ထောက် ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူ အညီများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက် ပေးရန် နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့ အစည်း များအား လုံခြုံရေး ကောင်စီက တောင်းဆို ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံ အရှေ့ ပိုင်းရှိ မြောက် ကီဗူနှင့် တောင် ကီဗူ ပြည်နယ် တို့တွင် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ နှင့် M23 အဖွဲ့တို့ အကြား တိုက်ခိုက် မှုများ စွာဖြစ် ပေါ်လျက် ရှိသော ကြောင့် အိမ်နီးချင်း ရဝမ်ဒါ နှင့် ယုဂန္ဓာ နိုင်ငံ များသို့ လူအများ အပြား ထွက်ပြေး နေရကာ လူ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ကျော်သည် နေအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး နေရပါသည်။ ရဝမ်ဒါ နိုင်ငံသည် M23 အဖွဲ့အား ထောက်ပံ့ ပေးနေ ကြောင်း ကွန်ဂို သမ္မတ နိုင်ငံက စွပ်စွဲ ပြောကြား ခဲ့သော်လည်း စွပ်စွဲ ချက်အား ရဝမ်ဒါ နိုင်ငံက ငြင်းဆို ထားပါသည်။
အီရန်နိုင်ငံအပေါ် ဆန့်ကျင်သည့် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု သစ်များအား အမေရိကန် ကွန်ဂရက်မှ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း
အီရန် နိုင်ငံ ၏ အငြင်း ပွားဖွယ် နျူ ကလီးယား အစီ အစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အီရန် နိုင်ငံအား ဖိအား ပေးရန် အတွက် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု သစ်များအား အမေ ရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘား များက ကြေညာ ခဲ့ပြီး နောက် တစ်ရက် အကြာ ၌ အီရန် နိုင်ငံ၏ ရေနံ တင်ပို့ မှုများအား ဆက်လက် ထိန်းချုပ်မည့် အရေး ယူပိတ် ဆို့မှု သစ်များအား အမေ ရိကန် ကွန်ဂရက် က သြဂုတ် လ ၁ ရက် နေ့တွင် ခွင့်ပြု ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု သစ်များအား အောက် လွှတ်တော်မှ ထောက်ခံမဲ ၄၂၁ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၆ မဲဖြင့် အတည် ပြုခဲ့ပြီး အထက် လွှတ်တော် တွင်လည်း တညီ တညွတ်တည်း ထောက်ခံ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု ပြဋ္ဌာန်း ချက်သစ် များအား အမေ ရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘား မားက လက်မှတ် ရေးထိုး ထုတ်ပြန် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု သစ်များ သည် အီရန် နိုင်ငံ အပေါ် တင်းကျပ် စွာပြ ဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် နိုင်ငံ ခြားရေး ရာကော် မတီ ဥက္ကဌ Ileana Ros-Lehtinen က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ရေနံ တင်ပို့ မှုသည် အီရန် နိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေး ဖြစ်ပြီး အရေး ယူပိတ် ဆို့မှု သစ်များသည် အီရန် နိုင်ငံ ၏ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ် လျက်ရှိ သောအ ဖွဲ့အ စည်းများ အပေါ် အဓိက ပစ်မှတ် ထား၍ ရေးဆွဲ ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဆောင်ရွက် မှုများအား အမေ ရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘား မားက ၂ဝ၁၁ နှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့ပြီး ၄င်း သည် အီရန် နိုင်ငံမှ ရေနံ ဝယ်ယူ လျက်ရှိသည့် ပြည်ပ နိုင်ငံ များမှ ဘဏ္ဍာ ရေးအဖွဲ့ အစည်း များအား အဓိက ရည်ရွယ် ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရေး ယူပိတ် ဆို့မှု များတွင် တရုတ် နိုင်ငံ Kunlun ဘဏ်နှင့် အီရတ်နိုင်ငံရှိ Elaf Islamic ဘဏ်တို့ လည်းပါ ဝင်ခဲ့ပြီး ၄င်း ဘဏ် များသည် ရေနံ ရောင်းချ ငွေများအား ပေးချေ ရန်အတွက် အီရန် ဘဏ် များသို့ အမေ ရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက် မှုများအား တရုတ် နိုင်ငံမှ ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ခဲ့ပြီး Kunlun ဘဏ် အပေါ် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု များအား ဖယ်ရှား ပေးရန် အမေ ရိကန် နိုင်ငံသို့ သြဂုတ် လ ၁ ရက် နေ့တွင် တောင်းဆို ခဲ့ကာ နှစ် နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက် စေမည့် လုပ်ရပ် များအား ရပ်တန့်ရန် ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
အီရန်နှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့သည် ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအား မြှင့်တင်ပေးရမည်ဆိုခြင်း
အီရန်နှင့် တူရကီ နိုင်ငံ တို့သည် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ် ရေးနှင့် လုံခြုံ ရေးအား မြှင့်တင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကြား ဆက် ဆံရေး ခိုင်မာ မှု၏ အရေး ပါပုံ တို့ကို အီရန် အဆင့်မြင့် ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ Akbar Hashemi Rafsanjani က အလေး အနက် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အီရန်နှင့် တူရကီ တို့သည် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် အဓိက ကျသော နေရာတွင် ရှိကြောင်း တူရကီ သံအမတ်ကြီး Umit Yardim နှင့် သြဂုတ်လ ၁ ရက် နေ့တွင် တွေ့ဆုံစဉ် Rafsanjani က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အီရန်နှင့် တူရကီ နိုင်ငံ၏ သဘောထား ရပ်တည် ချက်ကွဲ ပြားမှု များသည် နှစ် နိုင်ငံ အပြန် အလှန် ဆက်ဆံရေး အပေါ် မထိခိုက် စေသင့်ကြောင်း ၄င်း ကထပ် လောင်းပြော ကြားခဲ့ ပါသည်။
အီရန် နိုင်ငံ အပေါ် စီးပွား ရေးအရ အရေး ယူပိတ် ဆို့မှု များအား ဆန့်ကျင် ကြောင်း၊ ဒေသ တွင်းနှင့် မွတ်စလင် ကမ္ဘာ၌ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် လုံခြုံရေး တို့အား မြှင့်တင်ရန် အီရန်နှင့် တူရကီ နိုင်ငံ တို့၏ စွမ်းရည် များအား ပူးတွဲ အသုံးပြု သင့်ကြောင်း Rafsanjani က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ နှစ် နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲမှု အပေါ် တူရကီ နိုင်ငံက ကြိုဆိုကြောင်း၊ နှစ် နိုင်ငံ အကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှု အားလုံးကို ဖြေရှင်းရေး ပိုမို ကြိုးပမ်း အားထုတ် ရန် တောင်းဆို ကြောင်းနှင့် အပြန် အလှန် အကျိုး စီးပွား များအား ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရေး အတွက် ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ရန် တူရကီ သံအမတ် ကြီးက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဆီးရီးယား ပြည်သူ များ၏ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန် တီးခွင့် ရရှိ ရေးနှင့် အနာ ဂတ်အား အဆုံး အဖြတ် ပေးရန် အတွက် အခွင့် အရေး တောင်းဆို ရာတွင် တူရ ကီနှင့် အီရန် တို့သည် အရေး ပါသော အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိ ကြောင်း Yardim က ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယ တပ်မတော် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် General Bikaram Singh နှင့် တွေ့ဆုံ
(တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယ တပ်မတော် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် General Bikaram Singh နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်)
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် အိန္ဒိယ တပ်မတော် ကြည်းတပ် ဦးစီး ချုပ်ရုံးတွင် ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် General Bikaram Singh နှင့် တွေ့ဆုံ ပြီး နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် (ကြည်း)များ အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ နှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ် များအား ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။